अनशनमा रहेका डा. केसीको मुटुमा समस्या – जनस्वास्थ्य खबर
अनशनमा रहेका डा. केसीको मुटुमा समस्या
काठमाडौं १३ साउन– विगत पाँच दिन देखि सरकार सँग चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न सात बुँदे माग राखेर ११औँ आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसी को मुटुमा समस्या देखिएको छ।
डा. केसीको उपचारको लागि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मेडिकल टिम गठन गरिएको छ। टिमका सदस्यामा डा. सुवास आचार्य,डा. दिव्यासिंह शाह, डा. जेन्टलकुमार श्रेष्ठ, डा. सन्तोष श्रेत्री, डा. सुमन बराल र नर्सिङबाट तारा कार्की छन्।
अन्य अनशनमा भन्दा यसपटक डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चाँडै नै गम्भीर भएको छ। शुक्रबार दिउँसो बाट डा. केसीलाई मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या देखिएको उपचारमा स‌ंलग्न डा. सुवास आचार्यले जनाकारी दिएका छन्। मुटुमा समस्या बढ्दै गए एक्कासी मुटु बन्द भई ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने डा. आचार्यको भनाइ छ।